आमा ! फेरी हजुरको सम्झनामा – रोल्पा समाचार
२०७८ बैशाख २९, बुधबार १३:५१ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७८ बैशाख २९, बुधबार १३:५१ गते
सन्दर्भः मातातिर्थ औंसी आमाको मुख हेर्ने दिन
आमाको अर्थ जननी, जन्मदाता, सृष्टिकर्ता, ममताकी खानी ! म कस्तो हुँला ? भन्ने कुराको पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै आँखा चिम्लिएर माया दिने मान्छे । कोखमा लुकाएर आफ्नो रगत दिएर कोखभित्र ९ महिना सम्म हुर्काउने माता । जे–जे भने पनि आमा मेरो सर्बे सर्बा हुनुहुन्छ । आमा विना हाम्रो सपना संम्भव छैन । आमालाई एक दिन होईन, प्रत्येक पल–पलमा आदर, सम्मान र सम्झना गर्नुपर्दछ । हामीले आमाको मुख हेर्ने दिन भनेर एउटा माता तिर्थ औंसीलाई विशेष रुपमा मनाउने गर्दछौ । नयाँ पुस्ताका बाबु नानीहरुले यसैलाई ःयतजभच’क मबथ भनेर एउटा उत्सव वा दिवसका रुपमा मनाउन थालेकाछन् । यो वास्तवमा गर्व र खुसीको कुरा हो ।
आमालाई सम्झनासाथ म आफैलाई सम्माल्न गाह्रो पर्छ । मेरी आमालाई मैले सम्पूर्ण रुपले स–शरीर भेट्छु । उहाँकै काखमा निदाएको त्यो यादलाई बर्वर आँसुको धाराले निथ्रुक्क भिजाउने गर्दछु । त्यो (कुशको) खरको छानो भएको एकतले मेरो गाउँको घर, जुन घर मेरो जन्मसँगै बनाईएको थियो रे । त्यसै घरको भुईतलामा रहेको ठूलो जाँतो (चाँखी) मा मकै ÷ गहुँ पिस्दै गर्दा आमाले मेरो टाउको आफ्नो काखमा राखेर मेरो बाँकी शरीरलाई एउटा बर्की विछ्याईएको रातो माटो र गोबरले पोतेको भुईमा सुताउनु हुन्थ्यो । म आमाको मुखबाट निस्किएको मधुर गीत अनि त्यहि जाँतोको एकनासको संगितमा मस्त निदाउथे । मैले चेत पाउँदासम्म अर्थात ६ वर्षको हुँदासम्म आमाको दुध चुस्थे । बिहान दाजुसँग विद्यालय जान्थे र बेलुका घरमा फर्कना वित्तिकै आमाको काखमा पल्टिएर दुध चुस्थे । सायद दुध आए पनि नआए पनि मैले दुध चुस्न पाए भने मेरो ममताको भोक यत्तिकै मेटिन्थ्यो । मेरो साईलो दाइ अलि चलाख हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाँही भान्सामा गएर विहानको खाना जे बचेको हुन्थ्यो, त्यो खानुहुन्थ्यो । त्यो बेला खास मेलापात भएका बेला बाहेक अहिले जस्तो दिउसोमा खाजा–नास्ता तयार गर्ने चलन नै थिएन । म आमाको दुध खाएर भान्सामा पुग्दा दाइले सबै खाना खाईसक्नु भएको हुन्थ्यो । त्यस पछि म आमाको काखमा फर्किएर आधा घण्टा भन्दा बढी समय डाको छोडी छोडी रोएको भर्खरै जस्तो लाग्छ ।
सिमलचौर कि बाहुनी बोई र छिमेकी साईनोले माईजु पर्नेहरुले आज पनि मलाई भेटेको बखत तिनै मेरा बाल्यकालका हरकत, रोना धोनाका कुरा गरेर स्मरण गराउनु हुन्छ । बच्चा देखि नै मेरो जीउडाल चाँहि सप्रिएकै (खाइलाग्दो) थियो भनेर भन्नुहुन्छ । मैले मेरो आमा विना त एक क्षण पनि बाँच्न सक्दैन जस्तो लग्थ्यो । कक्षा ९ मा पढ्दा सम्म मैले आमा विना संसार नै अन्धकार देख्ने गर्थे । गाउँमा बृद्ध मान्छेहरु मरेको देख्दा, सुन्दा म आफै घरमा रुने गर्दथे । मेरो बाजेको निधन हँुदा म कक्षा ९मा पढ्थे । मैले मेरो बाजेको पार्थिब शरीर पहिलो पटक काँधमा बोकेर घाटसम्म पु¥याएको थिए । पहिलो पटक मान्छेको पार्थिब शरीरलाई नजिकबाट छोएको र हेरेको पनि बाजेलाई नै हो । चतुर्भुज घाटमा बाजेको पार्थिव शरीर पु¥याए पछि मैले नयाँ दृष्य देखे । मेरो बाबालाई कहिल्यै रोएको देखेको थिएन । उहाँ असाध्यै रुखो र खरो स्वभावको मान्छे, बाजेको सोकमा असाध्यै भावविह्वल भएर डाँको छोडेर रोएको मेरै आँखाले देखे । त्यसपछि मेरो ममतामयी आँमा क्यान्सरले ग्रस्त भएर विस्तरामा लडीरहेको बेला मेरो बाबा धेरै पटक मुटु फट्ने गरी भक्कानिएर रोएको देखेको छु । बाजेलाई दाहसस्कार गरेर घर फर्किए पछि म बिरामी पर्ने गरी रोएको थिए । मैले एक हप्ता कक्षा नै छोडेर घरमा बसे । मलाई यस्तो महसुस भयो कि बाजे वित्नु भयो अब बाबाको पालो आयो । बाजेका जिउँदा दुईभाइ छोराहरु मध्ये मेरो बाबा जेठो हुनुहुन्थ्यो ।
कक्षा १० मा पढ्दा समेत आमालाई दिनमा एक पटक देखिन भने म एक्लै कुनामा बसेर रुन्थे । हाम्रो तीन ठाउमा घर थियो र कहिले काहि आमा भएको घरमा जान पाएको हुदैनथे । आमाले पनि मलाई त्यतिकै मायाँ गर्नुहुन्थ्यो । केहि मिठो बस्तु पाक्यो भने त्यो दिन भेट भएन भने २ दिन सम्मको लुकाएर राखीदिनु हुन्थ्यो । मैले धेरै पटक बासी मासु खाने गरेको छु । उहाँको एउटा ममतामयी बोली थियो मलाई बोलाउने ! मेरी कान्छी तिमीका गएका थियौं ? मेरो मायाँ लाग्दैन” भनेर सुमसुमाउनु हुन्थ्यो । आमा मैले हजुरलाई अहिले पनि उत्तिकै मायाँ गर्दछु । मेरो सिद्धान्तले भगवानलाई विश्वास गर्न सक्दैन,तर सम्पूर्ण रुपले भगवान मान्ने हो भने म आमा हजुरलाई नै भगवान सर्वस्व मान्दछु ।
मेरी आमा हजुरलाई साष्टाङ्ग दण्डवत ! पल–पलको आदर, सम्मानसहितको मेरो मुटुभरीको मायाँ । मेरो दुर्भाग्य मैले मेरो आमाको अन्तिम मुख हेर्न पाएन । आमा क्यान्सरले थलिएर बेडमा लडिरहेको अवस्थामा मैले डेढ महिना पहिले भेटेर फर्किएको थिए युद्धमा । म नेपालको सुदरपश्चिमका गाउँ–टोल, शहर र डाँडापाखामा जनमुक्तिकोलागि टाउकोमा रातो कफन बाँधेर लालसेनाको कमाण्डर बनेको थिए । पार्टीले मेरो कार्यक्षेत्र त्यतै तोकेको थियो । आमाको स्वास्थ्य लाभ हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी थिए । देशमा संकटकाल थियो । सरकारी सुरक्षा फौजले हत्या, अपराध, आतंङ्क मच्चाईरहेको थियो । पार्टीको आदेशमा मैले लडाईको योजना बनाउनु पर्दथ्यो । मेरी आमा र मेरो घर–परिवारको ख्याल राख्ने मौका नै मिल्दैनथ्यो । मैले मेरो आमालाई उपल्लो टोलका दाइ शान्तराजको पसलबाट २ दर्जन विस्कुट लिई सिरानीमा राखिदिएर फर्किएको त्यो दिन नै मेरो ममतामयी आमासँको अन्तिम भेट भयो । मैले युद्ध मोर्चाको एक कुनामा आमा विनाको टुहुरो भएको जनाकारी पनि समयमा पाउन सकेन । टेलिफोन र मोवाईलको सहज पहुँच बनिसकेको अवस्था थिएन । १ महिना बितेको रहेछ, आमाको निधन भएको ! मत कञ्चनपुरको चुरे पर्वतमा सहयोद्धाहरुसँग हतियारसहित परेड खेल्दै थिए । एउटा अग्लो बुटामा चढेर भारतमा रहेकी दिदीलाई टेलिफोन गरे । त्यसपछि बल्ल घरको वियोगान्त खबर पाएको थिए । मेरी आमाले यो संसारबाट मलाई फेरी कहिल्यै नभेट्ने गरी मलाई युद्धमा पठाएर सधैकालागि बिदा हुनुभएछ । मेरा हातखुट्टा लत्रिए, संसारै अध्यारो भयो । मलाई सहयात्री कमरेडहरुले सान्तोना दिनुभयो । म निकै टाढा थिए, देशमा संकटकाल थियो । हिडेर घरमा आउन २५ दिन लाग्थ्यो, युद्ध चलिरहेको थियो, मैले युद्धको मोर्चा सम्हाल्नु पथ्र्यो । मेरो काँधमा वर्गयुद्ध जित्नु पर्ने कार्यभार थियो । जनतालाई समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनको जालोबाट मुक्त बनाउनु थियो । सदियौं देखि मान्छे–मान्छे बीचको भेदभाव र असमानताको अन्त्य गर्नु थियो । मेरी आमालाई त्यहिबाट कोटी–कोटी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे, धेरै सम्झिए । त्यो बेलामा मसँग कुनै विकल्प थिएन, म निरिह बने। श्रदेय क. श्रवणले मलाई राम्रोसँग आश्वस्थ बनाउनु भयो । मैले जीवन र मृत्युको अर्थ खोजे । मैले थुप्रै सहयात्रीहरुलाई एउटै मोर्चामा सँगै लड्दालड्दै गुमाएको पीडा सहेको छु । आमाको निधनको पीडालाई पनि मैले सहे ।
आमा हजुर विना म र हामी कसैको पनि रचना संभव थिएन । हजुरले मलाई अमुल्य जीवन दिनुभयो । मैले हजुरको आपत्तिका अन्तिमका दिनहरुमा स्याहार सुसार गर्न पाएन । म जस्तो बैगुनी छोरालाई पनि यति धेरै मायाँ दिने मेरी आमा म हजुरप्रति नतमस्तक छु । माता र पिता भन्दा ठूलो अरु केहि हुन सक्दैन । यसै अवसरमा म संसारभरका आमाहरुप्रति र सम्पूर्ण महान नारीहरुप्रति श्रद्धाले शिर निहुराउन चाहान्छु । मेरी आमाले यो संसारबाट अन्तिम पटक आँखा चिम्लिनु पूर्व आफ्नो तोते बोली र इसाराले ‘कान्छो–कान्छो बिजे खै बिजेलाई बोलाउनु, उसलाई मायाँ गर्छु ।’